Politikan'ny cookie | The Rward Foundation - Fitiavana, firaisana ary Internet
Cookies sy ny fomba mahasoa anao
Ity pejy ity dia mamaritra ny politikan'ny cookie an'ny The Reward Foundation. Mampiasa cookies ny tranonkalantsika, toy ny ankamaroan'ny tranokala, mba hanomezana anao traikefa tsara indrindra azonay atao. Cookies dia rakitra an-tsoratra kely apetraka amin'ny solo-sainanao na findainao rehefa mizaha tranonkala ianao. Ny fampahalalana entin'ny cookies dia tsy afaka amantarana anao manokana, fa azo ampiasaina hanomezana anao traikefa manokana momba ny tranonkala. Raha te hianatra bebe kokoa momba ny fampiasana cookies amin'ny ankapobeny ianao dia tsidiho azafady Cookiepedia - momba ny mofomamy.
Manampy antsika ny cookies:
Ataovy miasa toy ny andrasana ny tranokalanay
Tadidio ny fanovana nataonao nandritra ny andrana
Hanatsara ny hafainganam-pandehan'ny habaka
Avelao hizara pejy misy tambajotra sosialy toy ny Facebook ianao
Hanatsara hatrany ny tranokalanay ho anao
Ataovy mahomby kokoa ny varotra ataontsika (amin'ny farany manampy anay hanolotra ny serivisy ataonay amin'ny vidiny izay ataonay)
Tsy mampiasa cookies izahay:
Angony ireo vaovao azo fantarina manokana (raha tsy misy ny fanomezan-dàlana avy aminao)
Angony misy fampahalalam-baovao sarotra (tsy misy ny alahelonao anao)
Alefaso any amin'ny tambajotra fampirimana
Ampidino ireo antontan-taratasy manokana ho an'ny antoko fahatelo
Afaka mianatra bebe kokoa momba ny cookies rehetra ampiasainay etsy ambany ianao
Omeo fahazoan-dalana izahay hampiasa cookies
Raha toa ka ahitsy ny fikirana eo amin'ny rindrambaiko ampiasainao hijerena an'ity tranonkala ity (ny browser-nao) hanaiky ny cookies entinay an'ity, sy ny fampiasanao ny tranokalanay, midika izany fa milamina ianao amin'izany. Raha maniry ny hanaisotra na tsy hampiasa cookies avy amin'ny tranokalanay ianao dia afaka mianatra ny fomba hanaovana izany etsy ambany, na izany aza dia mety hidika fa tsy hiasa araka ny antenainao ny tranokalanay.
Cookies Function amin'ny tranokala: ny mofonay manokana
Mampiasa cookies izahay mba hanatanterahana ny tranonkalanay:
Mahatsiaro ny fikarohanao fikarohana
Tsy misy fomba hisorohana ireo cookies ireo noho ny tsy fampiasana ny tranokalanay.
Ny cookies ao amin'ity tranonkala ity dia napetraky ny Google Analytics sy The Reward Foundation.
Ny tranonkalantsika, toy ny ankamaroan'ny tranonkala, dia misy ny fampiasa omen'ny antoko fahatelo. Ohatra iray mahazatra dia horonantsary YouTube natsofoka. Ny tranokalanay dia misy ireto manaraka ireto izay mampiasa cookies:
Google (YouTube) - politika fiarovana fiainan'olona
Ny fandefasana ireo cookies ireo dia mety hanimba ny asan'ny antoko fahatelo ireto
Tsiambaratelo Social Website
Azonao atao ny 'Mankafy' mora foana na mizara ny atinay amin'ny tranonkala toy ny Facebook sy Twitter izay nampidirinay ny bokotra fizarana tao amin'ny tranokalanay.
Cookies dia apetraky ny:
Ny voka-dratsin'ny fiainana manokana momba izany dia tsy mitovy amin'ny tambajotra sosialy amin'ny tambajotra sosialy ary hiankina amin'ny safidin'ny fiainana manokana nofidianao tao anatin'ireo tambajotra ireo.
Cookies momba ny statistikan'ny mpitsidika tsy fantatra anarana
Mampiasa cookies izahay mba hanangonana statistikan'ny mpitsidika toa ny isan'ny olona nitsidika ny tranonkalantsika, karazana teknolojia ampiasainy (ohatra Mac na Windows izay manampy amin'ny famaritana rehefa tsy mandeha araka ny tokony ho an'ny teknolojia manokana ny tranokalanay), mandra-pahoviana mandany amin'ny tranokala izy ireo, pejy inona no jereny sns. Manampy anay hanatsara hatrany ny tranokalanay izany. Ireo antsoina hoe 'analytics' ireo ?? Ny programa dia milaza amintsika ihany koa, amin'ny fomba tsy mitonona anarana, ny fomba nahatratraran'ny olona an'ity tranonkala ity (oh: avy amin'ny motera fikarohana) ary raha efa teto izy ireo talohan'ny nanampiany anay hamantatra izay atiny malaza indrindra.
Google Analytics. Afaka mahafantatra bebe kokoa momba azy ireo ianao Eto.
Mampiasa ny tatitra momba ny Demografika sy mahaliana amin'ny Google Analytics ihany koa izahay, izay manome antsika fijery tsy fantatra anarana momba ireo taona sy ny tombontsoan'ireo mpitsidika ao amin'ny tranokalanay. Azontsika atao ny manatsara izany data izany hanatsarana ny serivisy sy / na ny atiny.
Vonoina ny cookies
Azonao atao ny mamono ny cookies amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny fikirakirana fanaovan-tserasera mba hampiatoana azy tsy hanaiky cookies (Ianaro ny fomba Eto). Ny fanaovana izany dia mety hametra ny fampiasa eto amintsika sy ny ampahany betsaka amin'ny tranonkalan'izao tontolo izao, satria ny cookies dia ampahany mahazatra amin'ny ankamaroan'ny tranonkala maoderina
Mety misy ny fanahianao manodidina ny cookies mifandraika amin'ilay antsoina hoe "spyware". Raha tokony hovonoinao ny cookies anao dia mety ho hitanao fa ny tanjon'ny rindrambaiko anti-spyware dia mahatratra tanjona mitovy amin'izany amin'ny famafana ho azy ireo cookies izay heverina fa manafika. Mianara bebe kokoa momba Fitantanana cookies amin'ny rindrambaiko antispyware.
Ny takelaka fampahalalana cookie ao amin'ity tranokala ity dia avy amin'ny votoatin'ny Attacat Internet Marketing http://www.attacat.co.uk/, masoivohon'ny marketing any Edinburgh. Raha mila fampahalalana mitovy amin'izany amin'ny tranonkalanao manokana ianao dia afaka mampiasa azy ireo Fanaraha-maso mahomby cookie.
Raha efa nampiasa a Aza manenjika tranokalan'ny mpitety tranonkala, raisinay ho famantarana izany fa tsy tianao ny mamela ireto cookies ireto, ary hosakanana izy ireo. Ireto no toe-javatra nosakananay: